Wararka - Sharaxaadda aqoonta aasaasiga ah ee ku saabsan wax ka sameysmada cirbadda
Sharaxaadda aqoonta aasaasiga ah ee ku saabsan cirbadda cirbadeynta
Mashiinnada wax lagu duro ee duritaanka ayaa ah mashiinno gaar ah oo loogu talagalay soosaarka alaabada caagga ah, kuwaas oo loo isticmaalo soo saarista qaybo balaastig ah oo kala duwan oo ku saabsan baabuurta, caafimaadka, macaamiisha iyo codsiyada warshadaha. Wax taaj oo kale duro waa farsamo caan ah sababta oo ah shanta sababood ee soo socda:
1. Kartida kordhinta wax soo saarka;
2. Qaabab fudud oo adag ayaa la samayn karaa;
3. Khalad aad u hooseeya;
4. Qalab kala duwan ayaa loo isticmaali karaa;
5. Qiimaha alaabta ceeriin ee hoose iyo qiimaha shaqada.
Mashiinka wax lagu duro ee irbaddu wuxuu adeegsadaa cusbi caag ah iyo wasakhda si uu u dhammaystiro wax isku duro. Mashiinka waxaa badanaa loo qaybiyaa laba qaybood:
Qalabka isku haysa - caaryada ku xir cadaadiska;
Cirbadda balaastigga ah ee qalabka duritaanka lagu durayo iyo caarada la dhalaaliyay ee ku duuban caaryada.
Dabcan, mashiinada sidoo kale waxaa laguheli karaa cabirro kaladuwan, laguna habeeyay inay soo saaraan qaybo cabirro kala duwan ah, waxaana lagu gartaa xoogga isku-haynta ee mashiinka wax lagu duro ee cirbadeynta abuuri kara.
Caaryadu badanaa waxaa laga sameeyaa aluminium ama bir, laakiin qalab kale ayaa sidoo kale macquul ah. Waxaa loo qaybiyaa laba qaybood, qaabkiisana si sax ah ayaa loogu farsameeyaa birta. Caaryadu waxay noqon kartaa mid aad u fudud oo raqiis ah, ama waxay noqon kartaa mid aad u adag oo qaali ah. Kakanaanta ayaa si toos ah ugu dhiganta isku xirnaanta qaybta iyo tirada qaybaha ku jira caarwalba.
Cusbi Thermoplastic wuxuu kujiraa qaab pellet waana nooca ugu badan ee la isticmaalo ee wax lagu duubo. Waxaa jira noocyo fara badan oo maadooyinka kuleylka leh oo leh waxyaabo badan oo maaddooyin ah kuna habboon noocyada kala duwan ee codsiyada wax soo saarka. Polypropylene, polycarbonate iyo polystyrene ayaa tusaale u ah miraha sida caadiga ah loo isticmaalo. Marka lagu daro xulashada ballaaran ee qalabka ay bixiyaan thermoplastics, sidoo kale waa kuwo dib loo cusbooneysiin karo, kala duwanaansho iyo fududahay in la dhalaaliyo howsha.
Nidaamka wax ku sameynta ee lagu sameeyay mashiinka wax lagu duro ee duritaanka wuxuu ka kooban yahay lix talaabo oo aasaasi ah:
1. Qalabka isku-haynta ee mashiinka ayaa labada qaybood ee caaryada isku wada riixaya;
2. Cirbadeyn-caag la shubay oo ka soo baxa qeybta cirbadeynta mashiinka ayaa lagu garaacay caaryada;
3. Cadaadiska haynta-caaga dhalaalay ee lagu duray caaryada ayaa cadaadis la saarayaa si loo hubiyo in dhamaan aagaga qeybta ay ka buuxaan caag;
4. Qaboojinta-u oggolow caagga kulul inuu ku qaboojiyo qaabka qaybta ugu dambeysa isagoo weli ku jira caaryada;
5. Qaab furida-qalabka isku haysa ee mashiinka ayaa kala saara caaryada wuxuuna u kala qaadaa labo qaybood;
6. Ejection-sheyga la dhammeeyay ayaa laga soo saaray caaryada.
Wax taaj oo kale duro waa tiknoolajiyad weyn oo wax soo saar badan. Si kastaba ha noqotee, sidoo kale waxay faa'iido u leedahay noocyada hore ee naqshadeynta wax soo saarka hore ama macaamiisha ama baaritaanka wax soo saarka. Ku dhowaad dhammaan qaybaha balaastigga ah waxaa lagu soo saari karaa iyada oo la isku duro, iyo dalabyada dalabkeedu waa kuwo aan xad lahayn, oo siinaya soo-saarayaasha habka kharash-ku-ool ah ee lagu soo saaro qaybo caag ah oo kala duwan.
Sax Wax taaj oo kale Inc., Mashiinka wax taaj oo kale duritaanka Dhuuban, Cirbadeynta saxda ah, Wax taaj oo kale duritaanka sax, Saxsanaanta wax taaj oo kale, Sax Wax taaj oo kale duritaanka caaga,